रोचक – Recent Nepal News
रोचक	उपहारको रुपमा कहिल्यै नलिनुहोस् यी ८ वस्तु,आर्थिक नोक्सान हुन्छ	जो कोही पनि उपहार पाएमा खुशी हुन्छौ । तर, के कहिल्यै सोच्नु भएको छ, उपहार दिनेवालाको नियत कस्तो छ भन्ने […]
Share this:Tweet	यस्ता ५ प्रकारका व्यक्तिलाई कहिल्यै नबताउनुहोस् आफ्ना गोप्य कुरा	महाभारत जीवन प्रबर्धनका थुप्रै सुत्रको स्रोत रहेको मानिन्छ । जीवन प्रवर्धनका यी सुत्रहरु आज पनि उत्तिकै उपयोगी छन् । महाभारतको […]
Share this:Tweet	सफल हुन चाहानुहुन्छ भने अपनाउनुस् यी ७ सुत्र	एजेन्सी । सफल बन्न को चहादैन ? हामी सबै सफल बन्न चाहान्छौ । हामि कयौ सफल व्याक्तिलाई आफ्नो प्रेरणा मानेर […]
Share this:Tweet	थाहा पाउनुभयो भने छक्क पर्नुहुन्छ, श्रीरामसँग विवाह गर्दा सीताको उमेर कति थियो?	तदनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्षको नवमी तिथि। हिन्दु धर्ममा यस दिनलाई सीता नवमी पनि भनिन्छ। धर्मग्रन्थका अनुसार, यहि तिथिमा माता […]
Share this:Tweet	कुकुरले टोकेपछि गाम्बियाको राष्ट्रपतिका छोराको मृत्यु	एजेन्सी । कुकुरको टोकाइबाट राष्ट्रपतिका पुत्रको मृत्यु भएको छ । कुकुरले टोकेपछि गाम्बियाको निर्वाचित राष्ट्रपति आडमा बैरोका ८ वर्षीया छोराको […]
Share this:Tweet	रोग बन्दै सेल्फि ! पहिलो सेल्फि कहिले खिचियो ? ‘सेल्फि’बारे जान्नैपर्ने पाँच तथ्य	काठमाडौं – बिशेषगरी युवाहरुमा सेल्फिका कारण रोगको सिकार बन्दै छैन् । सुगठित शरीर देखाउने यो लत बढी युवतीहरुमा देखिएको छ […]
Share this:Tweet	पढ्न नछुटाउनुहोस् ,अब्राहम लिङ्कनका यी वाणी,जसले तपाइँलाई खास मान्छे बनाउँछ	अब्राहम लिङ्कन अमेरिकाका १६औं राष्ट्रपति हुन् । उनको कार्यकाल सन १८६१ देखि १८६५ सम्म रह्यो । अमेरिकामा दास प्रथा अन्त्यको […]
Share this:Tweet	तपाइँ अहिलेसम्म पनि सिंगल हुनुहुन्छ ?अब खरीद गर्न सक्नुहुन्छ गर्लफ्रेण्ड !	एजेन्सी – तपाइँ अहिलेसम्म पनि सिंगल हुनुहुन्छ भने चिन्ता नलिनुहोस् अब डिजिटल गर्लफ्रेण्ड किन्न पाईने भएको छ । एक्लो पुरुषहरुको […]
Share this:Tweet	टिभीको रिमोट चोरेको आरोपमा २२ वर्षको जेल सजाय	एजेन्सी-टिभीको रिमोट चोरेको आरोपमा एक व्यक्तिलाई २२ वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । अमेरिकाको इलिनोइसस्थित ह्विटन सहरका एरिक ब्रेमवेल नामका […]
Share this:Tweet	माघेसंक्रान्तिमा दान गर्न चाहनुहुन्छ ? राशिअनुसार दान गर्नुहोस्, चिताएको पूरा हुन्छ !	काठमाडौं – जब सुर्य धनुबाट निस्किएर मकर राशिमा प्रवेश गर्दछ तब हिन्दु धर्मावलम्बीले माघको १ गते माघे अर्थात् मकर संक्रान्ति […]